Aqoon isweydaarsi loo furay macalimiinta jaamacadda Soomaaliya+Sawirro – Radio Muqdisho
Aqoon isweydaarsi loo furay macalimiinta jaamacadda Soomaaliya+Sawirro
Aqoon isweydaarsigan oo loo qabtay macalimiinta jamacadda Soomaaliya ayaa socondoono muddo sedex maalmood kaasi oo ay casharro ka bixinayaan macalimiin quburo ah sida Prof Nuur Diiriye Xirsi.
Dood cilmiyeedkan ayaa inta uu socdo waxaa lagu baranaya casharro la xiriira maareynta xogta (Data management) taasi oo wax badan ka caawinaysa macalimiinta si ay ula tacaamulaan maareynta xogaha laxiriira howlahoodi shaqo.
Guddoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Prof C/raxmaan Macalin Axmed Ablaal ayaa sheegey in aqoon isweydaarsigan uu aad muhiim ugu yahay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda taasi oo uu ku tilmaamay mid dhanka horumarka ah loo qaaday.
“Een waxaan oganahay in waxbadan ay naga maqanyihiin wax badan in ay naga maqan yihiin cilmiga meel uu ku dhamaado malahan siyaasada jaamacada Soomalaiya waa in qofkasta oo aqoonyahan dalka dib ugu soo laabto in aan ka faaidaysano ama dalka jooga waan kaaga mahad celinaynaa” ayuu yiri gdoomiyaha jaamacadda Soomaaliya.
Sidoo kale mas’uuliyiintii goobtasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Maxamed Macalin Axmed oo isna dhankiisa si weyn uga hadlay barnaamijkan la xiriira maareynta xogta waxaana uu muujiyaay ahmiyadda ay u leedahay maamulka iyo macalimiinta.
Guddoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda ayaa yiri “waxaan idinku dhiiri gelinaynaa sida jaamacada Soomalaiya iyo madaxdeeda u dadaalayaan adinkuna aad ku dadaashaan sidii aad kor ugu qaadi lahaydeen tayeynta taclinta iyo daacadnimada ardayga aad waxbareysaan’
Jaamacadda Soomaaliya waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu weyn dalka Soomaliya waxaana mudooyinkii ugu dambeyeey maamulka uu ku howlanaa sidii loo tayeyn lahaa waxbarshada ardayda si ay uga qeyb qaataan horumarka dalka maadaama ay dhigtaan kumanaan arday kana qalin jebiyeen dufcado badan oo haatan shaqeeya.
Wasiirka amniga gudaha oo tababar u furay askar ka tirsan ciidanka booliiska+Sawirro